Zavamaniry fitsaboana rano: toetra, fitsaboana ary tombony | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | tontolo iainana
Amin'ny asan'ny olombelona rehetra dia miteraka rano maloto izay tsy maintsy tsaboina. WWTPs no gara zavamaniry fitsaboana rano maloto ary tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ireo rano ireo. Rano vokatry ny hetsiky ny olombelona izay avy amin'ny tanàna, indostria, fambolena sns. Mametraka loza mitatao amin'ny tontolo iainana satria ny famafazana sy ny fivoahana dia afaka mamoaka zavatra misy poizina izay miteraka loza voajanahary.
Noho izany, holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny zavamaniry fitsaboana rano.
0.1 Fomba fitsaboana rano
1 Fitsaboana amin'ny zavamaniry maloto
1.0.1 Fitsaboana voalohany
1.0.2 Fitsaboana faharoa amin'ny zavamaniry fitsaboana
Fomba fitsaboana rano
Mba hahafahan'ny rano miverina amin'ny tontolo voajanahary dia tsy maintsy manaraka fitsaboana maromaro izy ireo izay ny tanjony dia ny manafoana ny fako. Ny fitsaboana dia miova arakaraka ny toetran'ny rano maloto sy ny toerana halehany. Fantatsika fa ny rano maloto dia angonina amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody izay mahatratra ny zavamaniry fitsaboana rano maloto. Eto izy ireo no iharan'ny fitsaboana isan-karazany hahafahana manadio azy ireo.
Saika amin'ny vanim-potoana rehetra, ny rano dia mazàna mijanona ho salan'isa 24-48 ora alohan'ny hamerenana amin'ny laoniny. Ity fantsona ity dia mety ho renirano, fitahirizana rano na ranomasina. Ao amin'ireo zavamaniry fitsaboana dia iharan'ireto manaraka ireto ny fitsaboana:
Pretreatment: Izy io dia misy ny fanafoanana ireo solida lehibe indrindra izay misy ao anaty rano, toy ny fasika sy menaka. Ity pretreatment ity dia ilaina mba hahafahana manafatra ny rano amin'ny fizotrany manaraka.
Fitsaboana faharoa: Ampiasaina ihany izy io raha te hanadio bebe kokoa ny rano handraraka azy amin'ny faritra voajanahary voaaro ianao. Noho ny halafosan'izy ireo dia matetika tsy atao ara-dalàna.
Izahay dia hanazava tsikelikely hoe inona avy ireo fizotrany lehibe mitranga amin'ireo zavamaniry fitsaboana.
Fitsaboana amin'ny zavamaniry maloto
Izy io dia misy fizotran'ny simika ara-batana sasany izay ampiharina mba hampihenana ny atin'ny poti mihantona ao anaty rano. Ny ankamaroan'ny valaka mihantona izay hita dia mety ho azo atsangaina na mitsingevana. Ireo izay azo atsangaina dia mazàna tonga any amin'ny farany rehefa afaka fotoana fohy, raha ity farany kosa poti-kazo kely dia kely izay efa tafiditra ao anaty rano ary tsy afaka mitsingevana ny sisan'ny antsako. Mba hamongorana ireo sombina kely kokoa ireo dia mila fitsaboana hafa mitaky fitakiana be kokoa.
Ny fomba sasany ampiasaina amin'ny fitsaboana voalohany dia misy ireto manaraka ireto:
Sedimentation: io no fizotrany mety hianjera amin'ny farany ny vongan-tsavony noho ny hetsika hery misintona. Amin'ity fizotrany ity, izay tsotra sy mora vidy, hatramin'ny 40% amin'ireo valaka ao anaty rano dia azo esorina. Ao anatin'ilay toeram-pitsaboana dia misy fiara mifono vy antsoina hoe decanters ary eo no misy ny sedimentation.
Fitsingevanana: Izy io dia misy ny fanesorana ny sombin-javatra, ny menaka ary ny menaka satria, noho ny hakeliny ambany dia mirona hipetraka amin'ny soson'ny rano izy ireo. Amin'ity dingana ity dia azo atao ihany koa ny manala ireo sombintsombiny ambany hakitroka. Mba hanaovana izany dia ilaina ny manindrona vovoka amin'ny rivotra hanamorana ny fiakarana sy ny fanesorana azy ireo. Amin'ity fitsangatsanganana ity dia azo esorina hatramin'ny 75% ny sombin-javatra miraikitra mihantona. Ity fizotran-javatra ity dia mitranga amin'ny fiara mifono vy hafa antsoina hoe floats aires levona.
Fanamafisana: dia dingana iray izay ahitana ny normalization ny pH. Midika izany fa ny rano dia tokony ahitsy amin'ny pH eo anelanelan'ny 6-8.5. Raha ny rano maloto asidra, ny zava-maniry manasitrana dia tsy maintsy mifehy ny habetsaky ny metaly mavesatra izay ampidirina amin'ireo akora alkaly mba hampiakarana ny faritry ny rano. Mifanohitra amin'izany no misy, fa ny rano maloto dia dioksidan'ny gazy karbonika kokoa no ampidirina hampihena ny pH amin'ny sanda ara-dalàna.
Fomba hafa: raha te-hahazo fanadiovana bebe kokoa amin'ny rano maloto ianao, dia ampiharina ny teknika sasany toy ny fampiasana tank septic, lagoons, sivana maitso na fizotran'ny simika hafa toy ny fifanakalozana ion, fihenam-bidy, oksidasi sns.
Fitsaboana faharoa amin'ny zavamaniry fitsaboana
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, raha tsy takiana amin'ny fanadiovana avo lenta, io fitsaboana faharoa io dia tsy atao amin'ny zavamaniry maloto. Izy io dia misy andiana dingana biolojika izay mikendry ny hanafoana tanteraka ny zavatra voajanahary ankehitriny. Izy ireo dia dingana biolojika izay anaovan'ny bakteria sy zavamiaina bitika vitsivitsy hanovana ny zavatra biolojika ho lasa biomassa, angovo, etona ary rano. Ny tombony an'io fitsaboana io amin'ny hafa dia 90% izy io.
Amin'ny fitsaboana faharoa an'ireo zavamaniry maloto dia manavaka azy ny fizarana misaraka amin'ny aerobika sy anaerobika. Ny teo aloha dia eo amin'ny fisian'ny oxygen ary ny faharoa kosa raha tsy misy oxygen. Andao hojerentsika hoe inona izy ireo:
Fizotra aerobika: ilaina ny mampiditra oksizenina amin'ireo fiara mifono vy misy stamens miditra amin'ny rano maloto. Mandritra io dingana io dia miseho ny fahasimban'ny zavatra biolojika ary mivoaka ny rano sy ny gazy karbonika. Amin'ity dingana ity dia esorina ny vokatra azota, toy ny amoniaka, izay miteraka poizina azota. Na dia tsy misy poizina intsony aza ny nitrate, dia endrika iray izay azo ampiasain'ny zavamaniry, noho izany dia mety hiteraka fitomboan'ny ahidrano sy fitomboan'ny otrikaina azy ireo. Ity dingan'ny fampitomboana ny otrikaina ity dia fantatra amin'ny hoe eutrofication.
Fomba anaerobika: Atao izany raha tsy misy ny oksizenina sy ny fanehoan-kevitry ny fermentative ao amin'izy ireo izay ahodina ho lasa angovo, gazy karbonika ary entona methane ny zavatra biolojika.
Hiresaka momba ny sasany amin'ireo fitsaboana atao amin'ny zavamaniry fitsaboana izahay:
Sludge mavitrika: Izy io dia ilay fitsaboana izay tanterahina amin'ny fisian'ny oksizena ary misy ny fampidirana flocs zavamananaina miaraka amin'ny zavamiaina bitika mba hahafahana manivana ny ôksizena izay nitranga ireo fanehoan-kevitra.
Fandriana bakteria: Dingana aerobika izy io ary tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana fanohanana izay ahitana zavamiaina bitika sy rano mijanona. Vitsy ny vola ampiana mba hitazomana ny toetran'ny aerobika.
Sivana maintso: Izy ireo dia zavamaniry voahondraka amin'ny rano maloto ary afaka mifoka ireo fitambarana ireo.
Fandevonan-kanina anaerobika: atao anaty fiara mifono vy mihidy tanteraka izy ireo raha tsy misy oksizenina. Eto dia misy bakteria mamokatra asidra sy metana rehefa manimba ny zavatra biolojika.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny zavamaniry fitsaboana sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » tontolo iainana » Zavamaniry fitsaboana
Fambolena herinaratra nokleary any Espana